Iikhamera zoMbutho waMapolisa kunye neMfihlo | Izisombululo ze-OMG
Xa amapolisa ase-US eqwalaselwa ngononophelo ngabahlali abakhonza kubo, iiofisi ezininzi zibamba iikhamera ezinxibayo ukuxela intsebenziswano yabo nabantu ngokubanzi. Amapolisa kunye namalungu olwela amalungelo afanayo ayethembele izigameko zokubekelwa ezinokubanceda banciphise ubungendawo kumagosa njengokunyusa ngokuthe ngqo kwindlela amapolisa abaphatha ngayo abahlali. Nokuba kunokuba njalo, ingxelo ekhutshiweyo kule veki iphelileyo inika ingxelo yokuba zingakanani ii-ofisi ezifuna umthetho ukuze zivuleleke malunga nokusetyenziswa kweekhamera- kunye nokurekhoda abakuqokelelayo.
Impembelelo yeKhamera zoMzimba ebantwini kunye neeNqanaba loLwaphulo-mthetho:
Eyona khadibhodi yamakhadi enxibe kakhulu eyomeleleyo evela kwiNkomfa yobuNkokheli yaMalungelo oLuntu kunye namaLungelo oLuntu, isebenzisana nezinto ezintsha kunye nendlela yokunika iingcebiso kwi-Upturn, yahlola ii-ofisi zamapolisa zase-50 zase-US zaze zabachazela ukugula kwinxalenye enkulu yeendlela ezisibhozo zoviwo. Ezi benchmark zibandakanya ukuba amapolisa akhuseleka kangakanani kukhuseleko lwerekhodi, nokuba amagosa avumelekile na ukuphicotha ifilimu phambi kokuba enze ingxelo, ukuya kuthi ga kubanjwa kangakanani, kwanokuba abantu bayayibona na ifilimu ababonisa kuyo. Imibutho eyahlukeneyo yokulingana kwezasekuhlaleni, abagqugquzeli bezokhuseleko kunye nemithombo yeendaba bayakha indlela ngoMeyi 2015 yokuchaphazela indlela iiofisi ezenza ngayo kunye nokuyisebenzisa.
Akukho naluphi kuzo olwahlula-hlula ofumana inqanaba lokuphumelela kuzo zonke iiklasi. Inyaniso ixelelwe nje i-13 idlulise imashali kwimimandla emininzi, ngokwe-Wade Henderson, umongameli kunye ne-CEO yeNkokheli yeNkokheli, ingqokelela yenkululeko yezentlalo eqokelelwe kwi-1950 ukuthetha nemibutho eyahlukeneyo kubandakanya i-NAACP kunye ne-ACLU. Iiofisi zamapolisa eFerguson, Mo, naseFresno, eCalif. Ziye zangakhathalelwanga ukuba zizalisekise nayiphi na indlela. U-Ferguson watsala ingqalelo yehlabathi kwiminyaka emibini eyadlulayo xa amapolisa apho abulala umntu ongaxhobanga waseMelika uMichael Brown, engenzakali, esenza ukuba ingxoxo-mpikiswano kwilizwe lonke igunyaziswe ngumthetho.
Inkxalabo ngokusetyenziswa kweekhamera zomzimba:
Amaqela amalungelo oluntu akhathazekile ukongeza ukuba inkqubo ye-biometric enobuso yokuvuma ubungqina inokusetyenziselwa ukwahlula abantu kwifilimu yekhamera, kunye nenqaku lesibhozo lamanqaku kumanqaku ekhompyuter axhomekeke kuxhomekeke ekuthini bafuna iindawo ezinokusetyenziswa kusini na. Ukuqamba okulindelwe ukuba kukhawuleze kubonwe abantu kwikhamera kufuna ukudityaniswa kwamandla, ukubala kunye neebhetri zekhamera engekabikho-nangona kunjalo inokutshintsha ngokukhawuleza njengoko iTaser International kunye nabanye abenzi bekhamera yomzimba bekhula amandla okuchitha. Okungakumbi, ukubvuma kobuso bakho bokususa imifanekiso njengoko ikho ngoku.
Amaqela amalungelo oluntu ayothusa amapolisa azosebenzisa iikhamera njengokucacisa igiya yokujonga ngelixa ebukele abambalwa bengabamelwane, utshilo uHenderson kudliwanondlebe noluntu. Iiofisi ezimbalwa ziye zaphendula kwezi zinto zinxunguphalayo ngokunyanzela izikhombisi-ndlela zokunyanzela ukusetyenziswa kwezinto ezintsha-ngaphambi kokuvuma ukufikelela. ISebe lamapolisa aseBaltimore yayililo lodwa kunyaka ophelileyo obonisa ubunkokeli kwinkomfa yeqhinga lokukhangela ifilimu. Elona phepha libonisa le nkomfa inqaku libonisa ukuba amapolisa eBaltimore County, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md., Kunye noParker, Colo.
"Ukusetyenziswa kwebhayometri kuya kuba ngumcimbi ophambili-kwaye kungabi kude kakhulu kwixesha elizayo," utshilo uJames Coldren, esongamela isigqeba kwiinkqubo zezolingano kwiZiko le-CNA loPhando lukaRhulumente, umbutho ongenzi ngeniso kunye nophando. Ifana nantoni na enye. Iibhayometri zingenza imiba ukuba ayilawulwa okanye itshekishwe kwaye abantu abaneenjongo ezimbi bayayisebenzisa. ”UColdren noWilliam Sousa, inkosi yeZiko loMgaqo-nkqubo oLawula uLwaphulo-mthetho kwiYunivesithi yaseNevada, eLas Vegas, bayaqhuba nophando. Inkqubo yokuhamba kwekhamera yeLas Vegas Metropolitan yeNkqubo yokuvavanywa komzimba. Ababandakanyekanga kwisifundo seNkokeli yobuNkokeli kodwa bafumanise ukuba, emva kokuthintelwa okuthile, iiofisi zamapolisa zimema abantu abanxibe iikhamera. U-Coldren uthi: "[KwiLas Vegas] icandelo lafumanisa ukuba izinto ezirekhodiweyo ziluncedo kwabathembekileyo kwaye zoyikeka koxanduva," utshilo uColdren.
Ngaphandle kokujonga ukuba yintoni eselunxwemeni, imiba eyahlukeneyo inyibilikiswa kuneebhayometri, utshilo uMichael White, utitshala wolwaphulo-mthetho eArizona State University ophonononge iikhamera ezinxibe umzimba kwiCandelo lezoBulungisa laseMelika (DoJ). "Ndivile ngengxoxo malunga [nokusetyenziswa kweebhayometri] kodwa andazi malunga nayiphi na imibutho ehamba ngokukhawuleza kule ndlela ngeli xesha." Kwimilinganiselo yeNkomfa yeNkokeli yobunkokeli ejikeleze, eyona ibalulekileyo xa amagosa erekhoda kwaye bakukhusela njani izifundo zabo - ngakumbi ezo ezigwenxa baxhaphaza abantu. Ezi zinto zixhalabisayo zokhuseleko njengoko iiofisi ezithile zenza amajelo e-YouTube okurekhodwa kwawo.
Inkxalabo malunga nenkxaso mali yeekhamera:
Iiyantlukwano ezininzi zibhekisa kwiindleko njengezithintelo ekusebenziseni ubuchule. Iikhamera ngokwazo zinokwandisa kwiindleko ukusuka kwi- $ 300 ukuya kwi- $ 800 igosa ngalinye, nenani elikhulu leedola ezichithwe ngokuthe ngcembe inyanga nenyanga kwi-stockpiling yevidiyo emva kwexesha elithile. Iindleko zayo nantoni na kodwa kunzima ukuyifumana: izixhobo, amalungiselelo kunye nokugcina ulwazi. Iimali zotyalo-mali, umzekelo, ukubanga okucothisiweyo okanye ubudlelwane obuncinci bezonxibelelwano, kuba kunokuba kunjalo, ayisiyiyo yonke into elula yokuvavanya, utshilo uWhite, umququzeleli weqela eliqeqesha lize lincedise ekuqinisekisweni kweeofisi zogunyaziso zomthetho ezineeprojekthi zekhamera zayo. ixhaswe ngemali yi-DoJ's Bureau of Justice Assistant (BJA) Inkqubo yokuPhumeza uPilato. Nangona kunjalo, oMhlophe bacinga ukuba inxenye yeendleko iya kuchasana. "Ezinye iiofisi zamapolisa ezinkulu zihlala zikhupha i-$ 10 ubuncinci lezigidi ngonyaka kwimeko eqhelekileyo," utshilo. "Ngethuba lokuba iikhamera ezinxibe umzimba zinciphise inani, yinto entle leyo."
I-BJA isebenzisa ikhadi layo lokuvavanya iindlela zekhamera yesebe zisebenzisa iindlela ze-17 kunyanzeliso lwenkxaso-mali, kubandakanya nokuba amagosa axelelwa nini ngexesha ekufuneka enze ngalo iikhamera zemizimba yazo kunye nendlela yokukhuphela ngokukhuselekileyo ukurekhodwa kwii-PC zeofisi. Kukho isizathu esivakalayo sokuba la malungiselelo ayalwamkela olo phando: I-BJA ichithe ngokusesikweni ngaphezulu kwe- $ 19 yezigidi kwiofisi ze-73 kwisizwe siphela ukuze ithenge iinkqubo zekhamera ezinobonakalayo.
Iikhamera zoMbutho waMapolisa kunye neMfihlo gqibela ukuguqulwa: NgoSeptemba 26th, 2019 by admin
2659 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-12 Namhlanje
IQela lamaPolisa aMakhwenkwe aWeleKhulayo aPhakamisa ukhuseleko kunye neenkxalabo zabucala
INDLELA yamaGosa amaPolisa yeZiko lamaNxeba aMakhwenkwe elichaphazela ikamva labucala eAsia
Ukuphakamisa iinkxalabo malunga noKhuseleko kunye neMfihlo yamaPolisa…